ACACIA CATECHU - ACACIA ACACIA - SOOSAARKA DALAGGA
Todoba dhibaato - jawaabta "catechu". Dhammaan wax ku saabsan walxaha Acacia
Catacas Acacia waa geed oo ka tirsan qoyska legume. Iyada oo gacan ka heleysa soo saaridda caleemaha, xanjada betel, vodka madow waa la diyaariyaa, sidoo kale waxaa loo isticmaalaa dheeh iyo wakiil tanning ah maqaarka iyo dharka. Sidaa darteed, catacas acacia waxaa sidoo kale loo yaqaan "macaan". Intaa waxaa dheer, laga soosaaray caleemaha ayaa bogsashada guryaha.
Acacia Tanna waxay u taagan tahay geed laanta kuwaas oo dhererkoodu gaari karo 10 ilaa 20 mitir. Geedkeeda ayaa leh hooska madow mugdi ah, iyo nidaam xidid xoog leh wuxuu leeyahay asal adag oo xoog leh iyo laan badan oo ka mid ah lakabyada carrada sare.
Laamihii catechu acacia waxaa lagu daboolay caleemo badan oo dheer, iyo ubaxyada huruud ah ayaa lagu ururiyaa inflorescences, oo la mid ah dhegta. Midhaha mawduuca 'acacia' - Tani waa nooc digir ah, gudaha taas oo ku dhuumanaya midab wareeg ah oo midab madow ah.
Sida geedka duurjoogta ah, catechu acat wuxuu badanaa ka helaa tropics Aasiya, Afrika, Sumatra, kaymaha Australia, Mexico, Jamaica iyo Java. Laakiin Hindiya iyo Pakistan ayaa dhererkoodu yahay warshad beeranaysa.
Alwaaxa qoryaha Acacia caan waa caan waxa la kala soocayo faraha badan ee fareeshka gaarka ah. Waxaa loo sameeyay sababtoo ah isku-dhafka walxaha sida catechin, epicatechin, iyo sidoo kale cabbirayaashooda. Waxaa intaa dheer, waxaa jira DMT iyo alkaloids oo kale oo leh tryptamine ee jilif iyo caleenta geed.
Qoryaha ayaa la jajabiyey, la kariyey wakhti biyo ah, ka dibna waa la kala bixiyay oo ugu dambeyntii la qalajiyey. Sidan oo kale soo qaado qoryaha (oo loo yaqaan - catechu). Qaybaheeda ayaa lagu rinjiyeeyaa midab-naxaas ah, waxay dhadhanayaan qadhaadh iyo qulqulo. Biyaha, iyo sidoo kale aalkolka ethyl, catechu way kala tagtaa iyada oo aan haysan.
Intaa waxaa dheer, warshad hilibka ah loo isticmaalo geedi socodka ciridka (intaa ka sii badan, mid ka mid ah noocyada - carab xanjo). Dareeraha dareeraha ah iyo hufnaanta ayaa ka soo baxa dildilaaca dabiiciga ah ee jirridda iyo laamihiisa, iyo sidoo kale ka soo jeeda jilicsanaanta la sameeyay ee jilif.
Aaminsan yahay in carafka cirridka ugu fiican ay kala soocaan 6-sano jirka ah acacia dhaqan. Carab cirridka iftiinka leh ayaa ka doorbid badan cirridka madow. Biyo qabow, waxaa loo beddelaa dareeraha qaro weyn, taas oo ay leedahay qalab dhegoole ah oo taa awgeed waxaa loo isticmaalaa meelo kala duwan sida koolada, gaaska, iwm. Gum waxaa sidoo kale loo isticmaalaa daawada: waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo kaniiniyada iyo emulsions,
Ka fogee badeecada qalabka ka soo baxa catechu ee qalalan iyo madow qabow. Qoyaan badan iyo kuleylka ayaa isbeddelaya sifooyinka wanaagsan ee diyaarinta oo dhan oo ku salaysan tannic acacia.
Xalka kalluunka waxaa lagu yaqaanaa qufac, qufac iyo xiiqda.
Falalku waa falgal liddi ku ah maadada, shubanka, cudurrada kale ee nidaamka dheefshiidka iyo dhacdooyinka dyspeptic.
Jilifka geedka waxaa loo isticmaalaa habka loo abuuro daroogo si kor loogu qaado rabitaanka cuntada iyo harraadinta.
Sidoo kale kalluunka wuxuu xanuujiyaa xanuunka, wuxuu xakameynayaa marinnada dhiigga, nabarrada bogsata. Sidaa darteed, xalinta catechu waxaa loogu talagalay maamulka afka, iyo isticmaalka dibadda. Garsoorayaasha ku salaysan waxay leeyihiin saamayn antimicrobial iyo waxtar leh anti-bararka.
Iyada oo tabar-dari iyo cirridka dhiigga leh xalka betel ku luqluqo afkaaga. Nidaamkani wuxuu ka caawiyaa inuu ilaaliyo xuubka xuubka ah ee saameyn xun oo dibadeed.
Ma aha oo kaliya cacaska acacia waa faa'iido leh, laakiin sidoo kale caleemaha. Waxay ka kooban yihiin kalluunka oo hoos u dhigaya da'da jirka, yaree halista burooyinka, xinjirowga, atherosclerosis, cudurka wadnaha, macaanka.
Waxay hagaajinaysaa dabacsanaanta darbiyada xididdada dhiigga, waxay kudartaa kharashka ugu fiican ee vitamin C lagama maarmaanka u ah jirka, ka saaro walxaha waxyeelada leh (tusaale, kalay, cadmium, lead, iwm.).
Ha isticmaalin daawooyinka betel ku salaysan daaweynta:
carruurta ka yar laba sano
dadka u nugul caloosha.
Haddii aad qaadato daawo wuxuu sababaa matag ama calool xanuun, waxay ka hadlaysaa dulqaad shakhsi ah. Xaaladdan, waa in soo dhaweynta si degdeg ah u joojiso.
Sababtoo ah maaddooyinka alkaloids ee kalluunka, waa lagama maarmaan in ay aad u taxaddaraan isticmaalka. Si aad u gashid qalabkan waa inuu ahaado kaliya marka la soo jeediyo dhakhtarka, si adag u ilaalinta taariikhaha loo qoray iyo dawooyinka.
Inta badan waxaa loola jeedaa saldhigga acacia si fiican u dulqaadan. Si kastaba ha noqotee, marar dhif ah, waxay kicin karaan xajiinta maqaarka. Dumarka inta lagu jiro uurka iyo nuujinta waa inay sidoo kale taxadaraan oo ay kala tashadaan takhtarkaaga ku saabsan soo dhawaynta.
Iyada oo ay ku haboon tahay in la soo dhaweeyo Catechu waxay saameyn ku yeelan kartaa jidhka. Sababtoo ah saameynta adag ee daroogada ayaa ka caawin kara xaalado badan, sidaas darteed waxaa muhiim ah in lagu helo laabta daawada guriga.
Marka xigta waxaad arki kartaa sawirka Acacia Catechu: